"Farshaxanka Dagaal" Istaraatijiyadaha Milatari waa Habka Xiga ee Suuqa Lagu Qabto | Martech Zone
Tartanka tafaariiqda ayaa aad u adag maalmahan. Iyadoo ciyaartoy waa weyn sida Amazon ay xukumayaan e-commerce, shirkado badan ayaa la halgamaya sidii ay u adkeyn lahaayeen booskooda suuqa. Suuqgeyaasha shirkadaha ugu waaweyn ee ganacsiga e-commerce ma fadhiyaan dhinacyada kaliya waxay rajeynayaan in wax soo saarkoodu uu kaco. Way isticmaalayaan Farshaxanka Dagaal istaraatiijiyado militari iyo xeelado si wax soo saarkooda looga hor mariyo cadawga. Aynu ka wada hadalno sida istiraatiijiyaddan loogu adeegsanayo qabsashada suuqyada…
In kasta oo noocyada awoodda leh ay u badan yihiin inay maal gashadaan waqti badan iyo ilo ilo badan oo taraafikada sida Google, Facebook iyo websaydhyo waaweyn oo gacansaar la leh, kuwa cusub ee soo galaya tafaariiqda waxay dareemi karaan inay ku xaddidan yihiin xulashooyinka markay isku dayayaan inay ballaadhiyaan qaybtooda suuqa. Kanaalladaani waa kuwo aad u tartamaya, oo sidaas qaali u ah in xitaa loola macaamilo qaab macno leh.
Si kastaba ha noqotee, haddii ay ku dhawaadaan suuqa iyagoo wata istiraatiijiyad militari oo garab ah, waxay maalgashi ku samayn karaan ilo gaar ah iyo bogag internet ah oo bartilmaameedsanaya, dhammaantoodna iyagoo adeegsanaya saamileyaal bartilmaameed ah. Istaraatiijiyaddu waxay oggolaanaysaa wixii mar ahaa a yar shirkadda si ay si wax ku ool ah u kobciso wacyigelinta calaamadaha iyo kobcinta dakhliga. Horumarka kobaca iyo wacyigelinta sumcadda ayaa isku amaahin doonta soo-galayaasha suuqa, si tartiib tartiib ah u kobcinaya awoodda ay ku qaadan karaan noocyada ugu waaweyn ee suuqgeynta iyo xayeysiinta ugu sarreysa.
Waa muhiim hadda, in ka badan sidii hore, in diiradda la saaro tartamayaasha. Tartanku waa mid ba'an oo si isdaba-joog ah u socda, qayb weyn maxaa yeelay caqabadaha gelitaanka tafaariiqda internetka ayaa aad u yar. Laakiin tan sidoo kale waxaa loo arkaa inay tahay fursad. Qaar badan oo shirkadaha silsiladaha waaweyn ka mid ahi ma ogaadaan illaa ay ka daahiyaan in hoos u dhac ku yimid, suuqa cusub ee suuqa ay la wareegeen qayb muhiim ah oo khadka tooska ah ah. Kuwaas hoosaadyo waxay noqon kartaa isha ugu weyn ee tartanka Titans-ka warshadaha dhowr sano gudahood.
Sidee tani ku bilaabatay?
Bartilmaameedka ka soo horjeedka Walmart ayaa tusaale guud u ah saameynta ay yeelan karaan istiraatiijiyadda militariga garbaha. Sanadihii 90-maadkii, Walmart wax cabsi ah kama qabin in Target ay leedahay awood ay macaamiisha kaga qaadato. Raadka Walmart ee xilligaas uma oggolaan doono Target inuu tartamo. Si kastaba ha noqotee, Target wuxuu ahaa istiraatiijiyad. Target wuxuu ogaa sida kaliya ee looga hormarin karo suuqa tafaariiqda weyn inuu diirada saaro qaybaha la xushay ee ay doonayeen inay xukumaan. Waqti kadib, Target wuxuu macaamiisha ka xaday Walmart iyadoo diiradda la saaray adeegyada maaliyadeed iyo qaybaha moodada.
Istaraatiijiyadda militariga ee dhinaca waxay si aad ah waxtar ugu yeelatay dhowr urur oo kale, sida dukaamada waaxda hoggaamineed oo laga badiyay soo galayaasha cusub ee khadka tooska ah '80s iyo' 90s. Dukaammada waaxda ayaa markii hore iibiyay xul ballaaran oo isugu jira alaabta guriga iyo korantada, laakiin kharashka ku baxayay in alaabta lagu keydiyo dukaanka ayaa sareysay, faa'iidada ay heleenna ma ahayn. Sidaa darteed, dukaamadu waxay bilaabeen inay korontada iyo alaabta guryaha kala baxaan khaanadaha, laakiin waxay ogaadeen inay taasi horseedday hoos u dhaca macaamiisha, taasoo aakhirkii keentay hoos u dhaca iibka. Dad aad u tiro badan ayaa ogaanayay awoodda adeegsiga internetka, taas oo u oggolaatay soo-galootiga cusub ee suuqa inay ku guuleystaan ​​iibka oo ay ka qaadaan wixii markii hore ahaa shirkad ganacsi e-commerce ah.
Tani waxay khuseysaa suuq geynta dijitaalka si isku mid ah.
Hadda wax walboo aad ubaahantahay waligaa waxaad kaheli kartaa internetka. Inkasta oo tafaariiqleyda sida Walmart iyo Target ay weli haystaan ​​qayb weyn oo ka mid ah suuqa, shirkaduhu way ku adag tahay inay waligood la tartamaan iibka khadka tooska ah ee tafaariiqleyda.
Waa kuwee qaar ka mid ah kooxaha dilalka geysta?
Raadinta shaatiga ragga waa hab fiican oo lagu fahmo sida tafaariiqleyda xariifnimada ahi ay uga faa'iideysanayaan shirkadaha warbaahinta aadka loo bartilmaameedsado si ay u iibiyaan wax ka badan dukaamada waaxda hoggaamineysa Way fududahay in loo qaato in dukaamada sida Macy, Nordstrom iyo JCPenney ay iibiyaan inta badan shaatiyada ragga. Laakiin, shirkadaha dharka ragga casriga ah sida Bonobos, Club Monaco iyo UnTUCKit ayaa si dhaqso leh suuqa ugu riixaya.
Shirkadaha dharka kor ku xusan ee labiska ee aan soo sheegnay waxay kasbanayaan suuqa, gaar ahaan baloogyo takhasus gaar ah leh, si ay u gaaraan dhagaystayaal cusub, dhammaantood iyagoo abuuraya iskaashiyo warbaahineed oo ka baxsan sanduuqa, laakiin shirkadaha warbaahinta ee mugga badan. Tusaale ahaan, UnTUCKit ayaa hadda ah shirkadda kaliya ee shaadhka ragga ee ka faa'iideysata Barstool Sports, oo ah shirkad warbaahineed oo keensatay in ka badan 6 milyan oo qof bogga websaydhka 12-kii bilood ee la soo dhaafay oo keliya.
Shaatiga ragga maahan qeybta kaliya ee taatikadan runta lagu hayo. Markaad fiirineyso dharka haweenka, waxaad arki kartaa isbeddello isku mid ah oo la helay iyadoo shirkado cusub ay suuqa soo galeen oo ay la tartamayaan Nordstrom iyo Macy's, kuwa ugu sarreeya ee iibiya dharka haweenka. Thirdlove, Yandy, iyo WarLively waxay in ka badan 50 milyan oo qof ka weeciyeen magacyada hogaaminaya goobahooda iyagoo si fudud Facebook ugu qabtay. Nordstrom waxay ogaatay in taraafikada ay hoos udhaceen ka dib markii SecondLove ay bilaabeen inay ka faa'iideystaan ​​Cupofjo oo ah isha taraafikada ee xoogan.
Qodobka ugu muhiimsan halkan waa soo-galootiga cusub maahan oo kaliya inay tartamaan, waxay ku guuleystaan ​​iyagoo adeegsanaya kala duwanaanta ilaha taraafikada, iyo diiradda saarista farsamooyinka bartilmaameedka saxda ah ee meelaha ay ciyaartoy dhaqameedku si fudud u daneynin inay aadaan, ama ay aad uga gaabiyeen abaabul kheyraadka.
Dukaammada waaweyn ee sanduuqyadu ma socon doonaan?
Hadda oo dhibaatada la ogaaday, dukaamada waawayn waa inay ilaashadaan ganacsigooda iyagoo difaacaya saddex meelood oo waaweyn: margin, taraafikada iyo sumadda / xiriirka.
Margin- Kaliya ha u maleynin in dukaamada tafaariiqda weyn ay yihiin isha kaliya ee tartankaaga. Fahmaan qaybaha ay dukaanku xukumaan oo ay ilaaliyaan kuwaas.
Taraafikada- Ogow taraafikada bartaada ka imaaneyso iyo sida taraafigani macaamiil ugu beddelayo. Si tan loo sameeyo, isticmaal aalado kaa caawin doona qor tallaabo la qiyaasi karo si loo wado taraafikada tayada leh si loo kordhiyo ilaha waxqabadka ugu sarreeya ee taraafikada gudbinta.
Nooc / Ogaansho- Adeegga macaamiisha ayaa isbeddelaya oo waa inaad ku sii horumartaa. Aad ayey muhiim u tahay in sumcad wanaagsan lala yeesho macaamiisha. Shirkadaha badanaa waxay helaan hal abuurnimada inteeda badan waxay dhacdaa markaad fahanto filashooyinka macaamiisha iyo sida warshadahaaga ula kulmaan rajadaas. La socoshada adeegga macaamiishaadu waxay fure u tahay joogtaynta xaaladda suuqa.
Haysashada faham guud oo ku saabsan cidda tartamayaashu ay noqotay mid sii adkaatay. Waxaa muhiim ah in la ilaaliyo cilmi baarista dadaalka badan leh si looga feejignaado sumcadaha soo baxaya ee suuqaaga. Si loogu guuleysto sanadka 2018, magacyadu waa inay diiradda saaraan cidda ay macaamiishoodu yihiin iyo sida loo bartilmaameedsado, dhammaantood iyagoo adeegsanaya istiraatiijiyad militari oo garab ah.
Ku saabsan Baahida Jump:
Baahida Jump waxay u saamaxdaa shirkadaha inay horumariyaan maalgashigooda suuqgeynta ee internetka iyagoo leh ujeedo iyo sax aan horay loo arag. Shirkadda abaalmarinta ku guuleysatay ee loo yaqaan 'Traffic Cloud ™' waxay isticmaashaa aragtiyo xisaabeed oo adag (sirdoon farsamo) si ay u falanqeeyaan nidaamka macaamiil ee tartan rasmi ah ee nidaamka macaamiisha. Barxadda ayaa markaa bixinaysa qorshooyinka waxqabadka ee mudnaanta la siiyay halka, sida iyo goorta la maal-galinayo doolarka suuq-geynta si looga kaxeeyo taraafikada tayada leh kanaallada oo dhan, taasoo keentay macaamiil cusub oo ka socda tartamayaasha tooska ah
Tags: AmazonBonobosdilaaga categoryClub Monacodalabbakhaarada waaxdaecommercemacy'ssuuqyadanordstromtafaariiqdabartilmaameedSaddex jacaylFeejignaanwalmartDagaalYandy
El Toro: Bar-tilmaameedka IP-Ku-saleysan, Xayeysiinta Juqraafi ee Cookieless
Sidee Suuqgeynta Emailka Dibedda ah u Taakuleyn Karaa Himilooyinkaaga Suuqgeynta